15 qof oo ganacsato u badan oo laga afduubtay Gobolka Hiiraan | Dhacdo
Home Wararka Maanta 15 qof oo ganacsato u badan oo laga afduubtay Gobolka Hiiraan
15 qof oo ganacsato u badan oo laga afduubtay Gobolka Hiiraan
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa si adag uga hadlay shan iyo toban qof iyo kun neefka lo’da ah, oo maalmihii ugu dambeysay ay maleeshiyada Ururka Al Shabaab ka afduubteen gobolkaasi.
Dadkan oo ganacsato u badan ayaa laga doonayaa inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan min boqol dollarka Mareykanka, oo lagu amray inay ka bixiyaan neef walba oo ay leeyihiin, sababo ku aaddan iyagoo loo haysto inay jebiyeen awaamiirtoodii ahayd inaanan lo’da gobolkaasi laga dhoofin karin Dekedaha Boosaaso iyo Berbera amaba aan la gayn karin deegaanada Puntland iyo Somaliland.
Shabaabka oo awaamiirtan soo rogay daba-yaaqadii bishii January ee sanadkan ayaa sheegay in lo’da laga dhoofin karo oo keliya Dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo. Shabaabku waxay xilligaa sheegeen in ciddii aan awaamiirtooda u hoggaansamin in neef walba oo lo’ ah lagu ganaaxi doono boqol dollar.
Gudoomiye Kuxigeenka Maaliyadda & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Hiiraan, Abuukar Cabdullaahi Maadey ayaa sheegay inay tani ka dambeyso, maadaama Shabaabka aanay canshuur ka qaadi karin xoolaha laga dhoofiyo Dekedda Boosaaso, ay door bideen in xoolaha laga keeno Gobolka Hiiraan laga dhoofiyo Dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo, si ay ugu canshuuraan xoolaha loo iibgeeyo dalalka Carabta.
“Shabaab awalba lagama sugeynin wax wanaagsan oo dadka waa dhibaateen jireen. Hadda waxaa u xiran shan iyo toban qof oo ganacsato, shaqaalihii xoolaha quminayay iyo illaa kun neef oo lo’ ah, oo calaa neef ay ka rabaan $100 oo ganaax ah.” Ayuu yiri Gudoomiye Kuxigeenka.
Gudoomiye Kuxigeenka ayaa yiri “Dadka waxay isweydiinayeen, haddii Beledweyne xoolaha laga leexiyo oo dowladda joogto, oo Muqdisho iyo Kismaayo oo dowladda ay joogto loo leexiyo, maxaa farqi ah oo u dhaxeeyo? In la ogaadaa rabaa Kismaayo iyo Muqdisho xoolaha hadda la geeyo, gaar ahaan lo’da in ay yihiin xoolo afduuban, oo awaamiirta ay bixiyeen ragga Muqdisho fadhiyo ee Shabaab u soo xilsaarteen ay tahay in xoolaha meeshaas laga soo afduubo, lagana dhoofiyo Dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo, si Boosaaso canshuur ay ka qaadaneyn uga qaataan Dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo.”
Isagoo hadalkiisa wata ayuu yiri “Ganacsiga intaan ogayn xor ayuu ahaa, meel walbana waa mari jiray, laakiin hadda waxaa bilaabatay in Shabaab ayagoo kaashanaya dhulkii ay dowladda joogtay ay ganacsigii kala xiraan.”
Maadey ayaa intaa ku daray “Dowladda Federaalka iyo Maamulka Hirshabelle, madaxda ugu sareyso inta badan waan gaarsiinay, in wax ka qaban doonaana waan rajeynaynaa, hadduu Ilaahay yiraahdo.”
Ganacsatada xoolaha ee Gobolka Hiiraan ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka cabanayay awaamiirta Al Shabaab.
Previous articleXanuun-dhaliyaha COVID-19 oo weli Somaliya gilgilaya
Next articleDadkii ugu badnaa oo lagu laayay dalka Myanmar